यदि तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ भने तपाईमा छ यस्तो खास राज, जान्नुहोस् के हो त त्यो ? – Onlines Time
November 13, 2020 November 13, 2020 onlinestimeLeaveaComment on यदि तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ भने तपाईमा छ यस्तो खास राज, जान्नुहोस् के हो त त्यो ?
ज्यातिष विद्या यस्तो विद्या हो जसले केहि न केहि तरिकाबाट मानिसको भविष्य बताउँछ । पछिल्लो समयमा यो विद्या प्रमाणित पनि भइसकेको छ । विभिन्न तरिकामध्ये ज्योतिष विद्याको एक तरिका हो हस्त रेखा । यहि रेखाको माध्यमबाट ज्योतिषले तपाईको आफ्नो जीवनको बारेमा धेरै कुरा बताउँछन् ।
बैतडी बस दुर्घ*टनाका घाइ*तेको बयान : बस त हावामा घुम्यो, अब बाँ’ चिदैन भन्ने लाग्यो
November 10, 2020 onlinestime
सँसारकै5ड-रलाग्दा नदि जहाँ पानी होईन एसिड बग्छ।। कहिले पनि यस नदिमा यी ग_ल्ती नगर्नुहोस्,(भिडियो हेर्नुहोस् र जानकारीका लागि सेयर गराै)
April 24, 2021 puspa